Abafundi emibukisweni ngemisebenzi eyayihlelwe yiKolishi lezoLimo, ezobuNjiniyela nezeSayensi.
Ucwaningo Lwabaqashi Luveza Ukuthi I-UKZN Ivelele Ngabafundi
I-South African Graduate Employers Association (i-SAGEA) isanda kwenza ucwaningo lokuqhathanisa abaqashi kanti imiphumela iveze ukuthi i-UKZN iphakathi kwamanyuvesi ayishumi aphambili eNingizimu Afrika uma kuziwa emibukisweni yokukhangisa ngemisebenzi nezinto zokuthuthukisa imisebenzi.
I-SAGEA izomemezela amanyuvesi amathathu aphume phambili kule mikhakha ngasekupheleni kwalo nyaka.
Umongo wocwaningo ubuvela ezinhlanganweni zabaqashi ezingama-79 emikhakheni ehlukene, eminingi exhumana namanyuvesi ukuqasha abafundi abaneziqu ukuze bangene ezinhlelweni zokuqeqeshelwa umsebenzi, ukuqasha labo abaqala ukusebenza nokuqasha abafundi abanamakhono antulekayo.
IKolishi lezoLimo, ezobuNjiniyela nezeSayensi (i-CAES), eliqeqesha nelifundisa iziqu eziningi ezidingwa ngabaqashi i-SAGEA ekhulume nabo, liba nemibukiso ngemisebenzi minyaka yonke yabafundi baseKolishi nabanye. Emibukisweni eba semakhempasini aseMgungundlovu, eWestville, nase-Howard College, abafundi bahlangana namanxusa ezinkampani nezinkampani ezihlukene ezisuke zizohlwaya abantu abangaqasheka noma lawo asuke eze ngezinhlelo zokuqeqesha abantu abenza iziqu noma abadinga imifundaze. Abafundi bathola ulwazi ngemisebenzi iziqu zazo ezingaziholela kuyona.
Imibukiso ngemisebenzi ihlale igcwala abafundi kanti yesekwa kakhulu ngabaqashi. Imibono yezinkampani ezinjenge-South African National Space Agency (i-SANSA), i-OVC, i-Citrus Academy ne-SAS ihlale iveza ukuthakasa lezi zinkampani ezikuthola kubafundi abakhaliphile, usizo lwabafundi nabasizi babasebenzi nokuhleleka kwezinto kule mibukiso.
Abafundi abaya emibukisweni babalula ubuhle bokuhlangana nabantu bezimboni ababahlanganisa nabafundi bakudala baseNyuvesi abakhetha imikhakha yezifundo abasuke bezenza, ukuthola amaqhinga enhlolokhono nokubazisa ngamathuba akhona emikhakheni yabo.
Ngaphezu kokuhlela imibukiso, i-CAES ibeka phambili ukuhlinzeka ngosizo abafundi ngenkathi besafunda ngenkathi besaqala ukuhlelela imisebenzi abazoyenza. I-Student Support Services asigcini nje ngokweluleka abafundi ngezinselelo zempilo ababhekene nazo kepha futhi sibalekelela ngosizo lwezigcawu zokufunda nokusebenzisa isikhathi kahle.
Abafundi bakwazi ukubekisa isikhathi sokuhlangana nomeluleki ngemisebenzi wase-CAES kanti bakwazi ukuthola usizo lokuphucula amakhono okubhala i-CV, inhlolokhono nokukhuluma phakathi kwabantu nokubuka amavidiyo namaphosta ngemisebenzi ehlukene.
Ngenxa yobhubhane i-COVID-19, i-CAES yenze uhlelo olukhethekile lokusiza abafundi ukuzicijela umsebenzi ukuze kuxhumaneke ngezindlela zobuchwepheshe, ukwenza izithangami zobuchwepheshe zokuzicija, izithangami zobuchwepheshe zokwelulekwa, izithangami zobuchwepheshe zokwesekana nokunye.
Ibambisene ne-SAGEA, i-CAES izobamba iqhaza kwi-VirtualGradExpo njengoba imibukiso okungahlanganeka kuyona ingeke yenzeke kulo nyaka ngenxa yokuthi akuhlanganeki. Izoba ngezinsuku ezintathu mhla wama-21, 29 kuNtulikazi nomhla we-13 kuNcwaba lapho kuzoba khona izikhungo zemfundo ephakeme ezingaphezu kwama-20 kanti izinsuku zokuqala zizogxila emisebenzini yezesayensi, ubuchwepheshe, ubunjiniyela nezibalo. Abafundi bangabhalisa ngobuchwepheshe.
Amagama: ngu-Christine Cuénod
Ababengabafundi base-UKZN Bathole i-SARS-CoV-2 Emanzini Endle
OwezobuDokotela KwezeMthetho Kwabangama-50 Abavelele e-Afrika
I-CCMS Ithole Umnikelo Omkhulu Wama-Laptop Ukufundisa Kude Asebeneziqu